OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman/maru, 1968, bande 030, face A
Title: Fonds Denise Bernot, birman/maru, 1968, bande 030, face A
Abstract: U Nan Way (selon les informations figurant sur le support-bande) lit un texte parlant de la fabrication des pots et des différents types de pots faits en Birmanie. Il parle ensuite plus précisément de l'artisanat d'U Min Yan, fabricant de pot de père en fils de 70 ans du village de Kokokwa près de Taungdwingyi (en Birmanie centrale). Un locuteur récite ensuite une série de mots dénombrés en maru (selon les informations figurant sur le support-bande), répétés trois fois de suite).
U Nan Way (according to the tape recording data) readsatext about pot making and different types of clay pots made in Burma. He focuses on U Min Yan,aseventy-year-old potter in Kokokwa village near Taungdwingyi (Central Burma). Next,aman pronouncesaseries of words in Maru language (according to the tape recording data) and repeats them three times.
ဦးနန်းဝေ (တိတ်ခွေအသံသွင်းချက်အရ) အိုးလုပ်ခြင်းအကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွှံ့ဖြင့်ပြု လုပ်သော အိုးပုံစံအမျိုးမျိုးတို့အကြောင်း စာပိုဒ်ကိုဖတ်ပြသည်။ သူသည် အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့အနီး ကုက္ကိုဂွရွာမှ အိုးလုပ်သားကြီး ဦးမင်းရန်ကို အဓိကထားသည်။ ထို့နောက် ယောက်ျားတဦးက မာရူဘာသာစကား ဝေါဟာရအတွဲများကို အသံထွက်ရွက်ဆိုသည်။ (တိတ်ခွေအသံ သွင်းအချက်အလက်များအရ) ထိုဝေါဟာရများကို ၃ ကြိမ်စီ ထပ်ကာထပ်ကာရွတ်ဆိုသည်။
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese/maru, 1968, tape 030, side A
Date Created (W3CDTF): 1968-07
Description: U Nan Way (selon les informations figurant sur le support-bande) lit un texte parlant de la fabrication des pots et des différents types de pots en Birmanie centrale (Shwebo, Monywa etc...) et en Basse Birmanie (Twante, Moulmein, Pyay etc..). Il parle ensuite plus précisément de l'artisanat d'U Min Yan, fabricant de pot de père en fils de 70 ans du village de Kokokwa près de Taungdwingyi. Il parle des différentes qualités, couleurs de l'argile et des endroits où creuser pour en trouver. Il faut la laisser tremper toute une nuit, puis la laver, la mettre en tas, etc... il énonce les 1 types de pots qu'on peut faire, les différentes décorations et notamment les 4-5 types de décorations florales. Il faut ensuite faire sécher les pots sous la maison pendant 2-3 jours, puis les mettre au soleil. Puis, quand onaenviron 150 pots, on les fait cuire toute la nuit (puis recouverts de paille). Il parle ensuite du commerce de la poterie, des prix, du différent vocabulaire technique relatif à la poterie selon les régions (jusqu'à 13.30 min.). (reprend à 13.53 min.). On ne peut faire les pots en saison chaude, ils peuvent casser. Il parle ensuite du détail de la cuisson des pots. Les pots cassés peuvent être utilisés pour faire du ciment. Il parle ensuite de la production et des profits du village de Mara et autres, district de Shwebo, dans les années 1960; du poids de l'argile utilisée, des types et des dimensions des pots fabriqués par les hommes, puis par les femmes; Kyaukse, Kyaukthalin, depuis le règne d'Alaungphaya fabriquent des pots (jusqu'à 27.20 min.) Un locuteur récite ensuite une série de mots dénombrés (de 96.1 à 165.1 en birman), en maru (selon les informations figurant sur le support-bande), répétés trois fois de suite (la vitesse de la bande est accélérée et l’enregistrement est coupé à 38.10 min.). NB: la suite et fin de l'enregistrement annoncée dans les inscriptions sur le support bande (BER-1968-BUR-bande 030-face B) ne se trouve pas dans la base de données numériques.
U Nan Way (according to the tape recording data) readsatext about pot making and different types of clay pots in Central Burma (Shwebo, Monywa etc...) and Lower Burma (Twante, Moulmein, Pyay etc..). He focuses on U Min Yan,aseventy-year-old potter in Kokokwa village near Taungdwingyi. He then reads about the different qualities and colors of the clay; the places where to dig to find it; how to prepare the clay; the different types of pottery wares; the different decorations; how to dry the pots; the firing process; the trade of pottery wares and the prices in the 1960s; other regions famous for pottery making (until 13.30 min. of the recording). (from 13.43 min.) He keeps on reading about the seasons when pottery can be made; details about the firing process; what to do with broken pots; the pottery industry in the 1960s in Mala and other villages in Shwebo district, the production and profits; weight of clay used for pottery making; types and dimensions of different pots made by men and women; the pottery in Kyaukse and Kyaukthalin since the Konbaung period (until 27.20 min.). Finally,aman pronounces words (numbered from 96.1 to 165.1 in Burmese) in Maru language (according to the tape recording data) and repeats them three times (the recording speed is accelerated and it cuts at 38.10 min.).
ဦးနန်းဝေ (တိတ်ခွေအသံသွင်းချက်အရ) အိုးလုပ်ငန်းအကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်အလယ် ပိုင်း (ရွှေဘို၊ မုံရွာ အစရှိသော)နှင့် အောက်မြန်မာပြည် (တွံတေး၊ မော်လမြိုင်၊ ပြည် စသော) မှ ရွှံ့ဖြင့်ပြုလုပ်သော အိုးပုံစံအမျိုးမျိုးတို့အကြောင်းစာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြသည်။ သူသည် အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိ တောင်တွင်းကြီးမြို့အနီး ကုက္ကိုဂွရွာမှ လုပ်သားကြီး ဦးမင်းရန်ကို အဓိကထားသည်။ ထို့နောက်သူသည် ရွှံ့အမျိုးအစားများနှင့် ရွှံ့အရောင်အမျိုးမျိုးတို့၏အကြောင်း၊ မည်သည့်နေရာများတွင် တူးရသည်ကိုပါ ဖတ်ပြသည်။ ရွှံ့ကိုအိုးလုပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရပုံ၊ ကွဲပြားသောအိုးပုံစံများ၊ အိုးများကိုအလှဆင်ပုံအမျိုးမျိုး၊ အိုးများအခြောက်ခံပုံ၊ အိုးဖုတ်သော နည်းပညာအဆင့်ဆင့်၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များအချိန်က အိုးကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အိုးစေျးနှုန်း များနှင့် အိုးလုပ်ငန်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသောအခြားဒေသများအကြောင်းကိုပါ ဖတ်ကြား ပြသည်။ (အသံသွင်းချက် ၁၃.၃၀ မိနစ်အထိ)။ (၁၃.၄၃ မိနစ်မှစ၍) သူသည် ဆက်လက်၍ အိုးလုပ်ငန်းကို ပြုလုပ်နိုင်သောရာသီကာလ၊ အိုးဖုတ်လုပ်ငန်းစဥ်အသေးစိတ်၊ ကွဲသွားသောအိုးများကိုမည်သို့စီမံသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ အချိန်က မလ နှင့် ရွှေဘိုနယ်ရှိ အခြားရွာတို့၏ အိုးလုပ်ငန်းအကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုနှင့် အမြတ်အစွန်း၊ အိုးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသောရွှံ့တန်ချိန်(အလေးချိန်)၊ အိုးအမျိုးအစား အရွယ်အစားအလိုက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတာဝန်ခွဲဝေလုပ်ကိုင်မှု၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကပင် အိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သော ကျောက်ဆည်နှင့် ကျောက်သလင်းဒေသအကြောင်းတို့ကို ဖတ်ပြ သည် (၂၇.၂၀ မိနစ် အထိ)။ နောက်ဆုံးတွင် အမျိုးသားတဦးမှ စကားလုံးများကို (နံပါတ်စဥ် ၉၆.၁ မှ ၁၆၅.၁ အထိ မြန်မာ ဘာသာဖြင့်) မာရူဘာသာစကားဖြင့် အသံထွက်ရွတ်ဆိုသည်။ (အသံသွင်းတိတ်ခွေပါ အချက် အလက်များအရ) ၃ ကြိမ်စီ ထပ်ကာထပ်ကာ ရွတ်ဆိုသည် (အသံသွင်းနှုန်းသည် မြန်လာပြီး ၃၈.၁၀ မိနစ်တွင် ပြတ်တောက်သွားသည်။)
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1968_BUR_030_A
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-e3476d05-939d-361f-85e7-10a0ec3bbf1f
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1968-BUR-030-A.wav
Citation: Bernot, Denise (researcher); Candier, Aurore (consultant); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Institut national des langues et civilisations orientales (sponsor); Vittrant, Alice (depositor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant). 1968. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_mhx iso639_mya olac_lexicon olac_narrative olac_primary_text